‘बेरोजगार संख्या घटाउन बैज्ञानिक नीति अपनाउन आवश्यक’ - Aarsha Khabar
‘बेरोजगार संख्या घटाउन बैज्ञानिक नीति अपनाउन आवश्यक’
by Aarsha Khabar १९ जेष्ठ २०७७, सोमबार June 1, 2020
कोभिड–१९ को माहामारीमा तपाईको सनसाइन ब्रेभेज प्रोडक्सन प्रा.लि.ले पानीको मागलाई कसरी पुरा गरिरहेको छ ?
– सबै भन्दा पहिले आर्ष नेपाललाई धन्यवाद । कोभिड–१९ को कारणले गर्दा विश्व नै यतिखेर लक डाउनको अवस्थामा छ । यस अवस्थालाई दोस्रोे विश्व युद्ध भन्दा पनि ठूलो समस्याको रुपमा व्यवसायीहरुले लिएका छन् । कृषि, पर्यटन, साना मझौला उद्योग देखि बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी सबैलाई असर गर्ने कुरा स्वभाविकै छ । हामी एउटा पानीको फिल्डमा काम गर्ने र यो अति आवश्यक बस्तुको रुपमा रहेकोले उपभोक्ताहरुलाई सहुलियत र सहज ढंगले पानी वितरण र घर–घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिरहेका छौं । हाम्रो कम्पनी पर्यटन क्षेत्रसँग पनि जोडिएको कारणले होटल, रेष्टुरेन्ट, लजलगायत क्षेत्रमा पानी जाने हुँदा कोभिड–१९ ले आक्रान्त बनिरहेकोले यतिखेर झण्डै ८० प्रतिशत मार्केट डाउन भएको छ । २० प्रतिशत मार्केटको लागि मात्र उद्योगहरु संचालन गरेका छौं । केही उद्योगहरुले कर्मचारीलाई विदा गरेर पठाइसकेको छ । हामीले २० प्रतिशत उद्योग संचालन गरेर कर्मचारीहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सजगता अपनाई सहुलियत र सुविधासहित काम लगाई रहेका छौं । अहिलेको अवस्थामा सम्पूर्ण पानी कारखाना मारमा परिरहेको छ । यसको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सरकारको उत्तर दायित्व र जिम्मेवारी हो । सरकारले सम्पूर्ण उद्योगहरुलाई कर, बैंकका व्याज, सहुलियत र सुविधा दिन सक्नुपर्छ, उद्योगीहरुसँग सहकार्य गर्न आवश्यक छ । आर्थिक संकटको अवस्था आउन सक्छ यसको समाधान सरकार र व्यवसायीबीच सरसल्लाह गरेर, योजना बनाएर राष्ट्रलाई निरन्तररुपमा आर्थिक स्तर बृद्धि गर्नको लागि लाग्नु आवश्यक छ ।
लक डाउनले प्रायः कम्पनीहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्, तपाईको सनसाइन ब्रेभेज कम्पनी डक डाउनले कतिको असर पारेको छ ?
– २०५६/०५७ सालतिर मैले कम्पनी सुरु गरे । जनयुद्ध कालमा भन्दा अहिलेको अवस्थामा कम्पनीलाई लक डाउनले जटिल किसिमको समस्या पैदा भएको छ । समस्या सँगसँगै समाधानका बाटोहरु पनि हामीले पैलाउनु पर्छ । समाधानको पाटो भनेको उद्योगी, कामदारहरुलगायत सम्पूर्ण सरकारी निकायहरुले आर्थिक नीति अबलम्बन गरेर आर्थिक नीति सवल बनाउन तिर लाग्नु पर्छ । पानी अति आवश्यक बस्तु भएकोले बगेर खेर गइरहेको अवस्थालाई प्रभावकारीता अपनाएर मापदण्ड बनाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ । विदेशमा पनि स्प्रिङ वाटर, हिमालय वाटर पाइन्छ । पानीलाई प्रमुख आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा अगाडि बढाउन सक्यो भने हरेक क्षेत्रबाट राष्ट्रलाई आर्थिक रुपमा सवल बनाउन सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्र अघि बढाउन पानी अत्यावश्क छ । आन्तरिक वा बाह्य पर्यटकहरुले मिनरल वाटर नै प्रयोग गर्दछन् । यदि पानी नहुने हो भने पर्यटन क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्र धरासायी हुन्छ । पानी विना जीवनको कुनै अस्तित्व नै छैन । यदि यो कारणले (मिनरल वाटर) पानी कारखाना बन्द भयो भने राष्ट्रको सबै क्षेत्रमा असर पर्छ । त्यसकारण सरकारले निगरानी गरेर पानी कम्पनीहरुलाई सहुलियत सुविधाहरु दिन आवश्यक छ ।
किसान काम गर्ने होस्, उद्योगी काम गर्ने होस्, व्यापार गर्ने होस् सरकारी निकाय समेतले पैसा कमाउनका लागि मात्र काम गर्छन् । समाजलाई योगदान दिने किसिमले काम गर्दैनन् भन्ने सोच अहिले पनि यथावत छ ।
कम्पनी संचालनमा समस्या त आएकै होला, स्थानीय सरकारबाट कतिको सहयोग पाउनु भएको छ ?
– नेपालमा जसले समाजमा कर्मको काम गरिरहेका छन् त्यसलाई नराम्रो रुपमा हेरिने गरिन्थ्यो । जस्तै लुगा सिलाउने, जुत्ता बनाउने, औजार बनाउने वर्ग । काम नगरिकन खाने मान्छेलाई समाजले काजीको दर्जाको रुपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । अहिले पनि नेपालमा त्यही किसिमका सोचहरु छन् । किसान काम गर्ने होस्, उद्योगी काम गर्ने होस्, व्यापार गर्ने होस् सरकारी निकाय समेतले पैसा कमाउनका लागि मात्र काम गर्छन् । समाजलाई योगदान दिने किसिमले काम गर्दैनन् भन्ने सोच अहिले पनि यथावत छ । हामीले कुनै समस्या लिएर जाँदा तीनै तहका सरकारले कमाउने बर्गको रुपमा मात्र हेरेकोले नेपालमा कुनै पनि व्यवसाय माथि उठ्न नसकेको हो । जबसम्म त्यस्तो सोच हट्दैन नेपालमा कुनै पनि किसिमका उद्योगहरु टिक्न सक्दैन ।
नेपाल बोटल्र्स वाटर उद्योग संघको पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले संरक्षकको हैसियतमा हुनुहुन्छ, उत्पादनलाई बजारमा कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ ?
– नेपालमा पहिले पानी खरिद गरि खाने स्थिति थिएन । शहरीकरणको विकाससँगसँगै नेपालमा पानीको अभाव हुँदा खरिद गरी खानेको संख्या बढ्दै गयो । पानीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै हामीले उद्योग संचालनमा ल्यायौं । हामीले उद्योग संचालन गर्नुअघि उपभोक्ता र उद्योगहरुको मापदण्ड, पानीको क्वालिटीलगायतको विकास भएको थिएन । म नेपाल बोटल्र्स वाटर उद्योग संघको अध्यक्ष भइसकेपछि विभिन्न सरकारी निकायहरुमा पानीको क्वालिटी मेन्टेन, पानीको मापदण्ड निर्धारण, सहज र सरल ढंगले पानी सप्लाई गर्न पाउनु पर्छ भन्दै सम्बन्धित निकायमा कुरा राख्यौं । जमीन मुनीको पानी निकाल्दा जमीन भासिन सक्ने समस्याहरु पनि आउने सक्ने भन्ने कुरा उठ्यो । त्यससँगै हामीले सरकारसँग रिचार्जिङ सिस्टमको डेभलेपमेन्टको व्यवस्था गरिनु पर्छ भनेरे प्रस्ताव राख्याैं । त्यतिबेला उद्योग मन्त्रालय, खानेपानी बोर्ड लगायत निकायमा कुरा राख्दा त्यती ध्यान दिएनन् । बारम्बार झकझकाइ रहेपछि वाटर रिचार्ज सिस्टमको विकास भयो । उद्योग व्यवसाय समाज, उपभोक्ता र सरकारप्रति उत्तरदायि हुनुपर्यो । पानी उद्योगले सबैभन्दा पहिले आफ्ना उपभोक्तालाई शुद्ध पानी पिलाउनुपर्यो । सरकारलाई उद्योगहरुले समयमै कर तिर्नुपर्छ । उद्योग संचालन हुँदा वातावरणलाई असर पर्नसक्छ जतिसक्दो कम असर गर्नेतर्फ उद्योगहरु लाग्न आवश्यक छ । आर्थिक, सामाजिक विकासमा योगदान पुर्याउन उद्योगहरुले सक्छ, त्यस्तोमा उद्योग व्यवसायी संघ लागि रहेको छ ।
जबसम्म देशमा नै युवालाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्न तबसम्म समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कल्पना नै गर्न सक्दैनौ ।
– सबैभन्दा पहिला नेपाललाई समृद्ध बनाउन उत्पादन गर्ने वर्ग नै पर्दछन् । किसान, मजदुर, उद्योगी र व्यवसायीको फरक ढाँचा हुन आवश्यक छ । उदाहरणको लागि ऊ एउटा ब्यापारी छ भने उसले विभिन्न देशसँग सम्पर्क राखि काम गर्न सक्छ । राज्यसँग लिएको ऋण जसरी भएपनि तिर्छ । किसान, मजदुर र उद्योग व्यापारी जस्तो होइन, उनीहरुले यहीं उत्पादन र उब्जनी गर्नुपर्छ । सरकारले किसान, उद्योग र ब्यापारीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न मिल्दैन । उद्योगमा पनि घरेलु उद्योग, साना उद्योग, मझौला उद्योग, ठूला उद्योग, अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र बहुर्राष्ट्रिय उद्योग छन् । तिनीहरुलाई सहुलियत, सुविधा र अबसर बराबर दियो भने सबै साना उद्योगहरु पनि निरन्तर संचालनमा आउन सक्छन् । यदि कुनै उद्योग २० वर्ष देखि संचालनमा छ । भर्खरै कुनै युवाले घरेलु उद्योग संचालन गर्न खोज्यो भने ठूला, साना, पूराना र नयाँको अन्तर भयो भने उसले काम गर्न सक्दैन । नेपालमा बहुर्राष्ट्रिय उद्योगसँग घरेलु उद्योग र साना उद्योगलाई जोड्नु पर्यो । जसले गर्दा रोजगारको अबसर सिर्जना हुन सक्छ । सरकारले कुनै पनि एउटै उद्योगीलाई सबै सामान उत्पादन गर्न दिन हुँदैन । जस्तै चाउचाउको लागि धेरै सामानको आवश्यक पर्छ । प्लाष्टिक एउटा कम्पनीले बनाउने, पीठो अर्को कम्पनीले बनाउने, मसला अर्को कम्पनीले बनाउने, चाउचाउ अर्को कम्पनीले बनाउने त्यस्तो व्यवस्था गर्दा कम्पनीहरु पनि धरै हुन्छ । हजारौंले रोजगार पनि पाउँछन् । सरकारले अबका दिनमा यस्तो नीति बनाउनु जरुरी छ । यदी कुनै व्यक्ति वा कम्पनी एकलाई मात्र सहुलीयत दिंदा एकमात्र माथि पुग्छ अन्य उठ्न सक्दैन र भएका कम्पनीहरु विस्थापित हुँदै जान्छन् । यस्तो नीति र व्यवस्थाले गर्दा हिजोका पूँजीपतिहरु पूँजीपति भइरहे, गरिबहरु गरिब नै भइरहे । सहुलितय साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरुलाई दिंदा आर्थिक रुपमा उ सबल हुन सक्छ । एउटै डालोमा राख्दा ठूला माछाले सानो माछालाई खाएजस्तै साना उद्योगहरु बन्द हुन पुग्छन् । यही कारणले गर्दा सक्षम युवाहरु आफ्नो सम्पत्ती धितो राखेर विदेशीन बाध्य छन् । बेरोजगार संख्या घटाउन बैज्ञानिक नीति अपनाउन आवश्यक छ । रेमिट्यान्सको भरमा देश चलाउने सोचले राष्ट्र सधै धरापमा पर्ने हो । जबसम्म देशमा नै युवालाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्न तबसम्म समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कल्पना नै गर्न सक्दैनौ । सरकारले जनतालाई यहाँ काम गर्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्यो । विदेशमा कोही चिनेका छैनौ, त्यहाँ काम गर्न सक्ने अनि यहाँ सबै चिज छ तर पनि काम गर्न नसक्ने किन ? त्यहाँ गएर बाँच्न सक्ने, त्यहाँको कमाईबाट यहाँको परिवार पाल्नु पर्ने, समस्या छ नि । यो समस्याको समाधान नभएसम्म नेपालमा आर्थिक उन्नती पनि हुँदैन । तिनै तहका सरकारले किसान र उद्योगी सित सहकार्य गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास गर्न जरुरी छ ।
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ८ पुग्यो, आइतबारमात्र १६६ जनामा पोजेटिभ
बाँके दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या १२ पुग्यो, ५ जनाको अवस्था गम्भीर
राजनीति भन्दा माथि मानवीयता
Aarsha Khabar April 24, 2020
लिम्पियाधुरा नेपालकै हो, दर्जनौ प्रमाण छ
Aarsha Khabar November 18, 2019 November 18, 2019
‘नेफ्स्कूनको अध्यक्षमा मेरो उम्मेदवारी यसकारण’
Aarsha Khabar December 10, 2019 December 10, 2019